Pro Samatar Shalay iyo Maanta: Hadii Madaxweyne aan ka noqon lahaa Soomaaliya, Somaliland waan aqoosan lahaa “MUUQAAL” |
Pro Samatar Shalay iyo Maanta: Hadii Madaxweyne aan ka noqon lahaa Soomaaliya, Somaliland waan aqoosan lahaa “MUUQAAL”
Prof, Ahmed Ismaciil Samatar oo ka mid ahaa ragii ku hungoobay musharaxnimada xilka madaxweyne ee dowlada Soomaaliya ayaa hadda si cad u sheegay ujeedka uu ka lahaa xilkaasi haddii uu ku guuleysto iyo caqabadaha ka horyimid.
Prof, Ahmed Ismaciil Samatar ayaa waxaa uu sheegay inuu ka shaqeyn lahaa haddii uu xilkaasi heli lahaa sidii Somaliland u noqon laheyd dal ka madaxbanaan dalka Soomaaliya, isagoona arrintaasi ku tilmaamay mida ugu horeysa ee qorshihiisa ah.
” Dadaalkii ugu danbeeyey ayaan qaaday taasi oo ah in aan madaxweynenimada Soomaaliya u tartarmo, ujeedka aan ka lahaana waxaa ugu horeeyey sidii aan uga shaqeyn lahaa arrinta Somaliland iyo Somaliya,iyaddoo haddii xal laga waayo uu qorshaheygu ahaa in laba dal oo deris ah kala noqdaan si walalnimo ku jirto ” ayuu yiri Prof, Ahmed Ismaciil Samatar.
Waxaana uu sidoo kale sheegay in 53 sano ee dalka Soomaaliya xor ahaa inuusan qof kasoo jeeda gobollada Waqooyi ee iminka la baxay maamulka Somaliland marna uusan noqon madaxweynaha dalkaasi.Isagoona sheegay inay sababtaasi xitaa qeyb ka tahay in dadka Somaliland xaq u yeeshaan dib ula noqoshada midowgii ay horey ula qaateen dalka Soomaaliya.
” 53 sano ayaa dalkan Soomaaliya xor ahaa oo dowlad lahaa marna qof kasoo jeeda gobollada Waqooyi madaxweyne kama noqon. Dadaal ayaan muddo 30 sano ah ku jiray anigaa xitaa halkaasi madaxweynenimo u doontay, laakiin natiijadii waxay noqotay musuqmaasuq iyo qabiil in la isku doorto oo aan dadkan iyo dalkan Somaliland waxba laga soo qaadin” ayuu yiri Ahmed Ismaciil isagoona intaasi raaciyey :
” Waxaa dadka Somaliland halkaasi looga ogol yahay waa inay hambada (wixii soo hara) la siiyo oo aan xilka ugu sareysa la siinin. Taasina waa mida ay Somaliland iyo dadkeeda diideyn anigana aan diiday” ayuu yiri Ahmed Ismaciil Samatar.
Ahmed Ismaciil Samatar oo si toos ah loo weydiiyey mar haddii uu sida uu sheegay kusoo hungoobay hankiisii Somaliweyn inuu iminka daacad u noqon doono Somaliland, islamarkaana uu ka shaqeyn doono sidii Somaliland u noqon laheyd dal Soomaaliya ka madaxbanaan ayaa sheegay inuu midaasi hadda diyaar u yahay.
” Waxaan Somaliland u tagay waa in aan dhageysto waxa ay shacabka Somaliland rabaan, waana dhageystay, waxaana go’aansaday in aan dhinac ka raaco oo aan la shaqeeyo. Aniga oo wixii hadda ka danbeeya ku shaqeyn doono rabitaanka shacabka Somaliland ” ayuu yiri Prof, Ahmed Ismaciil Smatar.
Hadalkan uu hadda sheegay Prof, Ahmed Ismaciil Samatar ayaa ahaa mid uu qarinayey intii uu ololaha doorashada ku jiray. Haddii aad dib u raacdo khudbadiisii musharaxnimada iyo shirarka uu kalsoonida baarlamaanka ku raadinayey waxaa ku jiray inuu yahay shaqsi u taagan midnimada ummada Soomaaliyeed. Balse taasi waxaa beeniyey qorshihiisa qorsoon ee uu maanta sheegay inuu watay.